मधेशमा निर्वाचन र विकासको बाधक को ? « Bikas Times
मधेशमा निर्वाचन र विकासको बाधक को ?
मिति: August 4, 2017
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको संविधान संशोधनको अडान कायम नभएको भए प्रदेश नं. २ का स्थानीय तहका मतदाता यति खेर स्थानीय तहमा आफ्नो जनप्रतिनिधि निर्वाचित गरिसकेका हुन्थे । राजपाको अडानका कारण अब असोज २ मा मात्र मतदान गर्न पाउने यो प्रदेशका जनता भने यतिबेला अन्य प्रदेशमा जस्तै मताधिकार प्रयोग गरेर आफ्ना प्रतिनिधि छान्न नपाएकोमा दुःखी छन् ।
पटकपटक गरी प्रदेश नं. २ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा चारपटक सार्ने सरकारको निर्णयप्रति यहाँका जनता आक्रोशित छन् । अन्य प्रदेशहरूमा पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्वाचन भइ जनप्रतिनिधि छानिसकेको अवस्थामा आफ्नो प्रदेश अहिले पनि सुनसान रहेकोमा कोही राजनीतिक दल त कोही सरकारप्रति आक्रोश पोख्छन् ।
सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको मतदान भइसक्दा समेत आफू बसेको प्रदेशमा निर्वाचन अझै अनिश्चित हुनुको पीडा उनीहरूमा छ ।
आफ्नो प्रदेशमा पटकपटक निर्वाचन मिति सार्ने सरकारको निर्णयलाई उनीहरू निर्वाचनको सम्मुखमा आइपुग्दा भने ‘अपरिपक्व’ भन्दै छन् ।
स्थानीय तहमा २० वर्षपछि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तर अन्य प्रदेशले जनप्रतिनिधि पाइसक्दा समेत प्रदेश–२ मा निर्वाचन नहुनुले स्थानीय तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाउनेमा चिन्ता पनि बढेको छ । ‘मतदान गर्ने र आफ्नो नेता आफैं छनोट गर्ने अधिकार सरकारले निर्वाचन सार्दै खोस्ने गरिरहेको छ, राजनीतिक मुद्दा समाधान गर्दै निर्वाचन गर्नुपर्ने सरकार केटाकेटी निर्णयमा अल्झेको छ,’–प्रदेश नं. २ का आम जनताको गुनासो छ ।
संविधान संशोधन नभएर पटकपटक निर्वाचन रोकिँदै आएको र निर्वाचन सार्ने संशोधन तर नहुने दोधारे निर्णयले पनि प्रदेश नं. २ को आम जनतामा आक्रोश छाएको छ ।
वर्षौंदेखि आन्दोलनरत मधेशी दलहरूको माग सम्बोधन पनि नगर्ने र प्रदेश नं. २ मा निर्वाचनमा रोकिराख्ने सरकारको नियत ठीक नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।
‘मधेशी मोर्चाको माग पूरा गर्नमा कसले रोकेको छ, त्यसलाई पूरा गर्दा सबैको भलाइ हुन्छ ? स्थानीय तहको निर्वाचन रोकेर दलहरू बहानाबाजी त गरिरहेका छैनन् ? यावत प्रश्नहरूको जबाब कसले दिने ?
मधेशको निर्वाचन र विकासमा प्रमुख तीन दल मुख्य दोषी छन् । निर्वाचन सारेर जनताको अधिकार पनि तीन दलले खोसिरहेका छन् ।
जनताको अधिकारमा दलका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ जोड्दा प्रदेश नं. २ को निर्वाचन अनिश्चय भएको हो । जनप्रतिनिधि चयन गर्न ढिला हुँदा विकासका गतिविधि प्रभावित हुने र जनताको भविष्य नै अन्धकारतिर धकेलिन्छ ।
वास्तवमा निर्वाचन सार्नु समस्याको समाधान नभई समस्या बल्झाउने काम मात्र हो । मुख्य रूपमा संविधान संशोधन लगायतका माग पूरा गरेर प्रदेश नं. २ को निर्वाचन सुनिश्चित गरी राजपासहितका असन्तुष्ट दललाई निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बन्नु पर्छ । तर, संविधान संशोधनको नाममा निर्वाचन नगरी जनताको मतदान गर्ने अधिकार कटौती गर्नु ठीक होइन ।
राजनीतिक समस्याको समाधान निर्वाचनबाट हुने भएकाले पनि दलहरू निर्वाचनबाट भाग्नु हुँदैन । राजपाको असन्तुष्टि आफ्नो ठाउँमा होला तर उसले पनि निर्वाचनलाई वहिष्कार नगरी जनताको अधिकारलाई रक्षा गर्नुपर्छ । सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि राजनीतिक धु्रवीकरण तीव्ररूपमा बढेको छ । मधेशी दल र असन्तुष्ट समूहको माग सम्बोधन गर्न सरकारले मंसिरको दोस्रो साता संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि मुलुकको राजनीतिक द्वन्द्व चर्किँदै गएको हो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको स्पष्ट साथबिना संशोधन पारित हुन सक्ने भएपनि एमाले इतरका राजनीतिक शक्तिलाई समेत सरकारले विश्वासमा लिन सकिरहेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सरकारबाट बाहिर राखेपछि उसले संविधान संशोधनमा सघाउने दिएको बचन पनि अन्योलमा परेको छ । अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितले संविधान संशोधनमा नसघाउने भएपछि यसको भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।
शुरूमा प्रस्तावको विपक्षमा रहेको मधेशी दल विस्तारै परिमार्जनसहित प्रस्तावको पक्षमा उभिएका छन् भने एमाले आगमी प्रदेश र संघीय संसदको चुनावी रणनीतिमा जुटेको छ ।
राजनीतिक निकास खोज्ने राजनीतिक दलहरूको अर्थहीन प्रयासले मुलुकको आगामी राजनीतिक यात्रा कतातिर जाने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । पछिल्लो समयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्तासँगै उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध फुकाउन प्रमुख शीर्ष नेताले शुरू गरेको संवादले चाँडै निकास प्राप्त नगर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयनको आगामी यात्रा झनै कष्टकर बन्ने निश्चित छ । राजनीतिक बृत्तमा निकासका लागि फरक फरक रोडम्यापका बारेमा छलफल भएका छन् । आखिरमा अहिलेको परिवेशमा अवरूद्ध राजनीतिक निकासको वास्तविक रोडम्याप के हुनसक्छ, त्यसबारेमा गम्भीर बहस दलहरूबीच हुन सकिरहेको छैन ।
संसदको दोस्रो शक्ति एमालेलाई सडकमा छाडेर राजनीतिक निकासको यात्रा सहज छैन । तसर्थ गतिरोधको मूल मुद्दा बनेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई केही समय पास गराउने वातावरणको सृजना गर्नु जरूरी छ । सरकारको विस्तारसँगै रूष्ट भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि सहमतिमा ल्याएर सरकार अगाडि बढ्नु जरूरी छ । खासमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संशोधन प्रस्तावको आडमा सरकारमा आफ्नो सुनिश्चिता खोजेकोले उसको राजनीतिक भविष्य सुनौलो छैन र यसको परिणाम पार्टीले पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट थाहा पाइसकेको छ ।
अब चार राजनीतिक शक्तिबीच सहमति कायम गर्ने र त्यसै आधारमा संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित पारित भएको राजनीतिक निकास निस्कन सक्छ ।
निर्वाचनमा ‘संघीयता’ ओझेलमा
धर्मेन्द्र झा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि हालै सम्पन्न निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ ।
फैसला काठमाडौका मतदाताको: पुष १ कालो दिवस कि, चैत्र २६ ?
सुधारको प्रारम्भ अन्ना हजारे बनेर पनि गर्न सकिन्छ । केजरीवाल हुनका लागि पनि लामो
फैसला काठमाडौका मतदाताको
ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस नै बन्छ
डा. शंशाक कोइराला, महामन्त्री नेपाली कांग्रेस नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइराला यतिबेला आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका
मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय हुन बाँकी यी हुन प्रदेश प्रमुख
काठमाडौं । सरकारले सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि बुधबार
प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा कुरा मिलेन फेरी आजै मन्त्रिपरिषद बस्ने
काठमाडौ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी केन्द्र तोक्नका लागि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप
ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा १८ जना घाइते
दाङ । तुलसीपुर–सुकौरा सडकखण्डअन्तर्गत तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१० राइखल्यानको मोडमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा १८ जना घाइते भएका
कार्यकारी निर्देशक : निमेन्द्र देब थापा
संवाददाता : सुन्दर थापा र राकेश मगर (अस्ट्रेलिया)
© 2018 संकेत मिडिया प्रा.लि.,अनामनगर पूर्वी गेट, काठमाडौं, इमेल : [email protected], 9801091256, 01-4248849